CD Drive ​ပျောက်​နေ​ခြင်း ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
CD Drive ​ပျောက်​နေ​ခြင်း
​ငြိမ်း​ချမ်း . ​ကျွန်​တော့် ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ CD Drive ​မ​တွေ့ ​တော့​တာ​ကို ​ဘယ်​လို ​ပြန်​တင်​ရ​မ​လဲ ​သိ​ချင်​ပါ​တယ် ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ဖြေ​ကြား​ပေး​ပါ CD Drive ​ကို ​တ​ခြား​စက်​မှာ ​ဖြုတ်​စမ်း​တော့ ​ကောင်း​နေ​ပါ​တယ် ..
(၁) My computer ​ကို right click ​ထောက်​လိုက်​ပြီး properties ​သွား​ပါ
==> my computer >> right click >> hardware >> device manager >> DVD/CD Rom drives. ​ကို ​ကြည့်​လိုက်​ပါ . General ​မှာ This device is working properly. ​ဆို​ရင်​တော့ ​ကိ​စ္စ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး . Drive ​အ​လုပ်​လုပ်​နေ​ပါ​တယ် . disabled ​ဖြစ်​နေ​လား ​မ​ဖြစ်​နေ​လား ​ကြည့်​လိုက်​ပါ . unabled ​ဖြစ်​နေ​ရင် disabled ​ပေး​လိုက်​ပါ .
BOBO HAN April 8, 2013 at 9:58 PM
​အ​ပေါ်​က​အ​ကို​ရေး​တဲ့​အ​တိုင်း​ဖြစ်​နေ​တယ် ​အ​ကို ​ကျွန်​တော်​ကို​လဲ ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ